ဆီးရီးယားလိုမြိုး ဖွဈသှားခငျြသလား ဆိုသူမြား – Kyaw Zaw Oo's Blog
January 9, 2020 January 9, 2020 web_master
ဆီးရီးယားလိုမြိုး ဖွဈသှားခငျြသလား ဆိုသူမြား
ဆီးရီးယားလိုမျိုး ဖြစ်သွားချင်သလား ဆိုသူများ
ယမန်နေ့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် JICM အစည်းအဝေး ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာ ပြောခဲ့သော စကားနှင့်ပတ်သက်၍ မိတ်ဆွေတစ်ဦးက ကျွန်တော့်ထင်မြင်ချက်ကို မေးပါသည်။ ယမန်နှစ် သည်ရက်ဝန်းကျင်လောက်က သူမ၏ လက်အောက်ငယ်သား ဖြစ်သူ သမ္မတရုံး ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဇော်ဌေးပြောခဲ့သော စကားမျိုးကိုပင် အလှတန်ဆာဆင်၍ သည်နှစ်ခါ သူမကိုယ်တိုင် ပြောဆိုခြင်းပင် ဖြစ်သည် ဟု ကျွန်တော်က မှတ်ချက်ပေးလိုက်ပါသည်။
ရခိုင်ပြည်ဟာ ပြည်တွင်းစစ်ဒဏ်ခံရတဲ့ ဆီးရီးယားလိုမျိုး ဖြစ်သွားချင်သလား ဟု ပြီးခဲ့သော တစ်နှစ်က သမ္မတရုံး ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ပြောခဲ့သည်။
သည်နှစ်ကျတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သည်လို ပြောပါသည်။ “ဒါတွေက မြင်သာတဲ့ ဆိုးကျိုးတွေပါ။ မမြင်သာတဲ့ ဆိုးကျိုးတွေက တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာဒေသ၊ ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ အနာဂတ်တွေ မှေးမှိန်ပျောက်ကွယ်သွားရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရေတိုကာလမှာ မာန်မာနတွေ၊ အာဃာတတွေနဲ့ လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေမှာ စီးမျောနေကြပါလိမ့်မယ်။ ရေရှည်ကာလမှာတော့ ဒီလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ပေးဆပ်လိုက်ရတာက ကျွန်မတို့တိုင်းရင်းသားတွေ၊ ကျွန်မတို့ တိုင်းရင်းသားဒေသတွေဆိုတာကို တဖြည်းဖြည်းချင်း အထင်အရှား တွေ့မြင်လာကြပါလိမ့်မယ်” ဟူသော ပြောစကားမှာ ဆီးရီးယားလို ဖြစ်သွားချင်သလား ဆိုသည့်စကား နှင့် အဓိပ္ပါယ်ချင်း မတိမ်းမယိမ်းပင် ဖြစ်သည် ဟု ကျွန်တော် ဘာသာပြန်ပါသည်။
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပင် ယမန်နေ့က အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရန့် မိန့်ခွန်းတွင် ကေဆမ် ဆိုလေမာနီး ကို သတ်ဖြတ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အကြမ်းဖက်သမားများသို့ ရည်ရွယ်ပြောကြားသောစကားကို ကြားလိုက်ရပါသည်။ “If you value your own life, you will not threaten the lives of our people.” ကိုယ့်အသက်ကို ကိုယ်တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုရင် ငါတို့ ပြည်သူတွေရဲ့ အသက်တွေကို ခြိမ်းခြောက်တဲ့ အလုပ်မလုပ်နဲ့ ဆိုသည့်စကား ဖြစ်ပါသည်။
ဦးဇော်ဌေး၏ စကား၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏စကား၊ ဒေါ်နယ်ထရန့်၏စကား ဤစကားများအားလုံးအား မှန်သည်မှားသည် ဘက်မတွက်ဘဲ ပြောရလျှင် တူညီသော အချက်တစ်ရပ်ကား လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အမြင့်ဆုံး ရန်လို ကျိုးပေါက်မှု ဖြစ်နေသည့်ကာလများတွင် ပြောကြားတတ်သည့် စကားများ ဖြစ်နေခြင်း ဖြစ်လေသည်။
လူတစ်ဦးချင်း၏ အဖွဲ့အစည်းတဖွဲ့ချင်း၏ လုံခြုံမှုကနေ လူမျိုးတစ်မျိုးလုံး၏ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံး၏ လုံခြုံမှုတို့အထိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သော အခြေခံသဘောတရားတစ်ခုမှာ လုံခြုံရေး ကြိဂံ (security triangle) သဘောတရား ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသဘောတရားအရ အမြင့်ဆုံး ရန်လိုမှု သတ်မှတ်ချက် အခြေအနေ ဖြစ်သည့် Deterrence (မလုပ်ရဲစေအောင် တားမြစ်သော လက်တုံ့ပြန် ပြုမှုလုပ်ဆောင်ချက်များ) လုပ်ကြရသော အခြေအနေသို့ ရောက်နေကြသည်ကို ပြညွှန်ချက်များသာလျှင် ဖြစ်ပါသည်။
၁။ Acceptance – လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း မိမိတို့၏ ပုံရိပ်ကောင်းမွန်မှု၊ လူထုလက်ခံနိုင်မှုအားဖြင့် လုံခြုံမှုရှိစေခြင်း။ (ဥပမာ- တစ်ရွာသား လာရောက်ပိုးပန်းသူသည် ရွာခံကာလသားများ နှင့် ခင်မင်ရင်းနှီးခြင်း)
၂။ Protection – မိမိတို့၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကာအကွယ် အစီအမံများကို ချမှတ်စီမံထားခြင်း၊ လူတစ်ဦးချင်း နှင့် အဆောက်အအုံ ပရ၀ုဏ် အကာအကွယ် အစီအမံများ အသင့်ရှိနေစေခြင်း။ (ဥပမာ – အိမ်တွင် CCTV တပ်ထားခြင်း၊ ရုံးတွင် လုံခြုံရေး ၀န်ထမ်းများ ငှားရမ်းထားရှိခြင်း၊ နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ နယ်စပ်တွင်တပ်စွဲထားခြင်း . . . စသည်အားဖြင့်)
၃။ Deterrence – ထိပါးလာပါက ပြင်းထန်သော တုန့်ပြန်မှုများကို လုပ်ဆောင်မည် ဖြစ်ကြောင်း တစ်ဖက်သားအား ကောင်းစွာသိရှိနေစေခြင်း။ (ဥပမာ – လက်သီးနှင့် ပြန်ထိုးနိုင်သည့် စွမ်းအား ရှိကြောင်းပြထားခြင်း၊ သေနတ်နှင့် ချိန်ထားခြင်း၊ စစ်ရေးအရ သံတမန်ရေးအရ ဥပဒေကြောင်းအရ တုန့်ပြန်တတ်ကြောင်း တုန့်ပြန်နိုင်ကြောင်း ကောင်းစွာပြသထားခြင်း)
မြန်မာတပ်များ၏ ရခိုင်တွင် လုံခြုံမှုအနေအထားသည် အလုံခြုံဆုံးအဆင့်ဖြစ်သည့် နံပါတ်တစ် Acceptance အဆင့် ရှိနေ/မရှိနေကား ထင်ရှားလှပါသည်။ ယခုကား နံပါတ်သုံး အဆင့် Deterrence အားဖြင့် ခြိမ်းခြောက်မှုတို့ကိုကား ရင်ဆိုင်နေကြရသည်မှာ သိပ်ဆန်းလှသည်တော့ မဟုတ်။
ကြွက်မနိုင် ကျီမီးရှို့သည့် Scenario အခြေအနေများ ရှိလာနိုင်ခြေတို့အား တွက်ဆလျက် ထိုဖြစ်ရပ်များအတွက် အရပ်ရပ် ပြင်ဆင်ထားရန် လိုပေသတည်း။
၂၀၂၀ ဇွန်န၀ါရီလ (၉) ရက်
ယမနျနကေ့ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ JICM အစညျးအဝေး ဖှငျ့ပှဲအခမျးအနားမှာ ပွောခဲ့သော စကားနှငျ့ပတျသကျ၍ မိတျဆှတေဈဦးက ကြှနျတေျာ့ထငျမွငျခကျြကို မေးပါသညျ။ ယမနျနှဈ သညျရကျဝနျးကငျြလောကျက သူမ၏ လကျအောကျငယျသား ဖွဈသူ သမ်မတရုံး ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဦးဇျောဌေးပွောခဲ့သော စကားမြိုးကိုပငျ အလှတနျဆာဆငျ၍ သညျနှဈခါ သူမကိုယျတိုငျ ပွောဆိုခွငျးပငျ ဖွဈသညျ ဟု ကြှနျတျောက မှတျခကျြပေးလိုကျပါသညျ။
ရခိုငျပွညျဟာ ပွညျတှငျးစဈဒဏျခံရတဲ့ ဆီးရီးယားလိုမြိုး ဖွဈသှားခငျြသလား ဟု ပွီးခဲ့သော တဈနှဈက သမ်မတရုံး ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူက ပွောခဲ့သညျ။
သညျနှဈကတြော့ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျက သညျလို ပွောပါသညျ။ “ဒါတှကေ မွငျသာတဲ့ ဆိုးကြိုးတှပေါ။ မမွငျသာတဲ့ ဆိုးကြိုးတှကေ တိုကျပှဲဖွဈပှားရာဒသေ၊ ဒသေခံတိုငျးရငျးသားတှရေဲ့ အနာဂတျတှေ မှေးမှိနျပြောကျကှယျသှားရတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ရတေိုကာလမှာ မာနျမာနတှေ၊ အာဃာတတှနေဲ့ လကျနကျကိုငျတိုကျပှဲတှမှော စီးမြောနကွေပါလိမျ့မယျ။ ရရှေညျကာလမှာတော့ ဒီလကျနကျကိုငျတိုကျပှဲတှရေဲ့ နောကျကှယျမှာ ပေးဆပျလိုကျရတာက ကြှနျမတို့တိုငျးရငျးသားတှေ၊ ကြှနျမတို့ တိုငျးရငျးသားဒသေတှဆေိုတာကို တဖွညျးဖွညျးခငျြး အထငျအရှား တှမွေ့ငျလာကွပါလိမျ့မယျ” ဟူသော ပွောစကားမှာ ဆီးရီးယားလို ဖွဈသှားခငျြသလား ဆိုသညျ့စကား နှငျ့ အဓိပ်ပါယျခငျြး မတိမျးမယိမျးပငျ ဖွဈသညျ ဟု ကြှနျတျော ဘာသာပွနျပါသညျ။
တိုကျတိုကျဆိုငျဆိုငျပငျ ယမနျနကေ့ အမရေိကနျသမ်မတ ဒျေါနယျထရနျ့ မိနျ့ခှနျးတှငျ ကဆေမျ ဆိုလမောနီး ကို သတျဖွတျမှုနှငျ့ ပတျသကျ၍ အကွမျးဖကျသမားမြားသို့ ရညျရှယျပွောကွားသောစကားကို ကွားလိုကျရပါသညျ။ “If you value your own life, you will not threaten the lives of our people.” ကိုယျ့အသကျကို ကိုယျတနျဖိုးထားတယျဆိုရငျ ငါတို့ ပွညျသူတှရေဲ့ အသကျတှကေို ခွိမျးခွောကျတဲ့ အလုပျမလုပျနဲ့ ဆိုသညျ့စကား ဖွဈပါသညျ။
ဦးဇျောဌေး၏ စကား၊ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ၏စကား၊ ဒျေါနယျထရနျ့၏စကား ဤစကားမြားအားလုံးအား မှနျသညျမှားသညျ ဘကျမတှကျဘဲ ပွောရလြှငျ တူညီသော အခကျြတဈရပျကား လုံခွုံရေးဆိုငျရာ အမွငျ့ဆုံး ရနျလို ကြိုးပေါကျမှု ဖွဈနသေညျ့ကာလမြားတှငျ ပွောကွားတတျသညျ့ စကားမြား ဖွဈနခွေငျး ဖွဈလသေညျ။
လူတဈဦးခငျြး၏ အဖှဲ့အစညျးတဖှဲ့ခငျြး၏ လုံခွုံမှုကနေ လူမြိုးတဈမြိုးလုံး၏ နိုငျငံတဈနိုငျငံလုံး၏ လုံခွုံမှုတို့အထိ ထညျ့သှငျးစဉျးစားနိုငျသော အခွခေံသဘောတရားတဈခုမှာ လုံခွုံရေး ကွိဂံ (security triangle) သဘောတရား ဖွဈပါသညျ။ ထိုသဘောတရားအရ အမွငျ့ဆုံး ရနျလိုမှု သတျမှတျခကျြ အခွအေနေ ဖွဈသညျ့ Deterrence (မလုပျရဲစအေောငျ တားမွဈသော လကျတုံ့ပွနျ ပွုမှုလုပျဆောငျခကျြမြား) လုပျကွရသော အခွအေနသေို့ ရောကျနကွေသညျကို ပွညှနျခကျြမြားသာလြှငျ ဖွဈပါသညျ။
၁။ Acceptance – လူ့အဖှဲ့အစညျးအတှငျး မိမိတို့၏ ပုံရိပျကောငျးမှနျမှု၊ လူထုလကျခံနိုငျမှုအားဖွငျ့ လုံခွုံမှုရှိစခွေငျး။ (ဥပမာ- တဈရှာသား လာရောကျပိုးပနျးသူသညျ ရှာခံကာလသားမြား နှငျ့ ခငျမငျရငျးနှီးခွငျး)
၂။ Protection – မိမိတို့၏ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာ အကာအကှယျ အစီအမံမြားကို ခမြှတျစီမံထားခွငျး၊ လူတဈဦးခငျြး နှငျ့ အဆောကျအအုံ ပရဝုဏျ အကာအကှယျ အစီအမံမြား အသငျ့ရှိနစေခွေငျး။ (ဥပမာ – အိမျတှငျ CCTV တပျထားခွငျး၊ ရုံးတှငျ လုံခွုံရေး ဝနျထမျးမြား ငှားရမျးထားရှိခွငျး၊ နယျခွားစောငျ့တပျဖှဲ့ နယျစပျတှငျတပျစှဲထားခွငျး . . . စသညျအားဖွငျ့)
၃။ Deterrence – ထိပါးလာပါက ပွငျးထနျသော တုနျ့ပွနျမှုမြားကို လုပျဆောငျမညျ ဖွဈကွောငျး တဈဖကျသားအား ကောငျးစှာသိရှိနစေခွေငျး။ (ဥပမာ – လကျသီးနှငျ့ ပွနျထိုးနိုငျသညျ့ စှမျးအား ရှိကွောငျးပွထားခွငျး၊ သနေတျနှငျ့ ခြိနျထားခွငျး၊ စဈရေးအရ သံတမနျရေးအရ ဥပဒကွေောငျးအရ တုနျ့ပွနျတတျကွောငျး တုနျ့ပွနျနိုငျကွောငျး ကောငျးစှာပွသထားခွငျး)
မွနျမာတပျမြား၏ ရခိုငျတှငျ လုံခွုံမှုအနအေထားသညျ အလုံခွုံဆုံးအဆငျ့ဖွဈသညျ့ နံပါတျတဈ Acceptance အဆငျ့ ရှိနေ/မရှိနကေား ထငျရှားလှပါသညျ။ ယခုကား နံပါတျသုံး အဆငျ့ Deterrence အားဖွငျ့ ခွိမျးခွောကျမှုတို့ကိုကား ရငျဆိုငျနကွေရသညျမှာ သိပျဆနျးလှသညျတော့ မဟုတျ။
ကွှကျမနိုငျ ကြီမီးရှို့သညျ့ Scenario အခွအေနမြေား ရှိလာနိုငျခွတေို့အား တှကျဆလကျြ ထိုဖွဈရပျမြားအတှကျ အရပျရပျ ပွငျဆငျထားရနျ လိုပသေတညျး။
၂၀၂၀ ဇှနျနဝါရီလ (၉) ရကျ
Previous မာနျအောငျတှငျ ၂၄ နာရီ ဆိုလာစနဈလြှပျစဈမီး နတေို့ငျးပွတျတောကျမှုဖွဈနေ၍ ဒသေခံမြားအခကျတှေ့ | Narinjara
Next ခမီးလူကွီး​တှေ မလိမ်မာ​တော့ ငယျ​သား​တှေ အ​နရေကပျြ​တယျ